MXGP3: yepamutemo motocross vhidhiyo mutambo waburitswa weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mudiwa wemotorsport nemavhidhiyo mitambo, uye chimwe chezvaunoda motocross midhudhudhu, ikozvino wave nemhanza, nekuti zita repamutemo rechikamu ichi rasvika paLinux. Tinotaura nezvazvo MXGP3 vhidhiyo mutambo, iyo yakavhurwa nerutsigiro rwekuparadzirwa kwako kweGNU / Linux, saka unogona ikozvino kunakidzwa neSpot motocross nekuwedzera kune F1, sezvatakatombotaura pane dzimwe nguva mune ino blog. Uye zvakare, iwe ikozvino une zvaderedzwa mune epamhepo online vhidhiyo mutambo zvitoro ...
El motocross ichauya kune yako PC nekuda kwekuburitswa uku kwakaburitswa uye kwakaburitswa neMilestone Srl studio uye iyo yakaendeswa kuLinux nekuda kweVirtual Programming. Kunyangwe yakazviita gore mushure mekunge MXGP3 yasvika yeWindows, iyi mhando yenhau inogamuchirwa nguva dzose. Uye zvakare, Virtual Programming yanga ichikotama kwenguva yakati mushure mekutangwa kweMicro Machines World Series neARMA 3, ikozvino yadzokera pachiitiko nekuvhurwa kweLinux, panguva ino nenyika yepikisiki iri mumaoko.MXGP3 ichave nerutsigiro rwemifananidzo NVIDIA uye AMD, saka chero GPU yauinayo pakombuta yako, mutambo unoshanda nemazvo. Uye zvakare, sekutaura kwandatove ndataura, haisi chero motocross simulator, iri iro zita repamutemo remakwikwi, sezvazviri kune iyo EA Sport F1 zita munguva yakapfuura uye parizvino iri mumaoko eCode Masters, iri iyo Iwo chete mutambo unoitwa zviri pamutemo, kunyange paine vamwe vakaita saRFactor, nezvimwe.
Mifananidzo yemutambo wevhidhiyo inotsigirwa nekutenda kune inonakidza giraidhi injini Shamisa Engine 4, iyo yatakataura nezvayo kakawanda muLxA, ichibvumira kuita kwakanyanya uye mhando yemifananidzo. Zvese izvi zvakarongedzwa nemakwara gumi nesere umo MX ushasha unokwikwidzwa zviri pamutemo, zvichiita kuti zvikwanisike kuchovha mudhudhudhu uine mazana matatu akagadzirwa zvakakwana. Uye kuisa yekupedzisa yekubata, ini ndanga ndati izvo zvino yaive nezvakakosha zvekudzikisira zve 18% muHumble Store, uye zvakare inowanikwa pane Steam.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » MXGP3: yepamutemo motocross vhidhiyo mutambo waburitswa weLinux